HORONANTSARY: Fantaro i Marina Khonina, mpitantana ny tetikasa Lingua antsika vaovao! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2022 5:53 GMT
F: Lazalazao aminay amin'ny teny fohy ny momba an'i Marina Khonina?
Marina Khonina: Saro-balina io fanontaniana io. Misy lafiny maromaro no azo ilazana izany. Ka ny miharihary dia ny fandikan-teny sy ny fiteny. Mpandika teny no nanombohako ary niara-niasa tamin'ny mpandika teny aho ary tena finaritra amin'ny fampiasana sy fianarana fiteny. Eo koa ny lafiny fikarohana/fampianarana ambony. Vao haingana aho no nahavita ny “Fifehezana” (Master) amin'ny haifiarahamonina, mifantoka amin'ny mahalahy sy mahavavy sy ny fanatanjahantena. Ny fanatanjahantena noho izany no lafiny fahatelo. Atleta aho. Ampahany lehibe amin'ny fiainako sy ny fiiziako izany, ary tena mahafinaritra ny mahita ny fifandraisan'ireo rehetra ireo.
F: Aiza avy ny firenena nonenanao?
MK: Teraka tany Kazakhstan aho, fony mbola anisan'ny Firaisana Sovietika izany ary nandany ny androm-piainako tany Azia Afovoany, tany Kazakhstan sy tany Kyrgyzstan. Nipetraka vetivety tany Etazonia aho fony mbola kely, ary niasa tany Japana ihany koa, ary nandany 10 taona mahery nonina sy niasa tany Torkia. Ary amin'izao fotoana izao, ao amin'ny faritra Metro Vancouver ety Kolombia Britanika, Canada aho no mipetraka. Noho izany, saika manerana izao tontolo izao.
F: Inona no fiteny hainao?
MK: Mahay fiteny roa aho, teny Rosiana sy Anglisy. Ka ireo heveriko ireo fiteny tena haiko. Ary ireo no fiteny miasa amin'ny maha mpandika teny ahy. Miasa amin'ny teny Frantsay ihany koa aho indraindray, fa avy amin'ny teny Frantsay ihany fa mankany amin'ny teny Frantsay, tsy dia tena mahay loatra ny teny Frantsay aho. Nandrisika ahy hianatra ny fitenin’ireo firenena ireo koa ny firenena nonenako. Noho izany mibadabada aho amin'ny teny japoney fa tsy tena mahay. Ary noho izaho nipetraka ela be tany Torkia dia mahatakatra ihany ny teny Tiorka. Ary nianatra fiteny kisendrasendra maromaro koa aho noho ny fitiavako ny fiteny, anisan'izany ny Grika tranainy sy Byzantine, ary mianatra teny Okrainiana aho izao.
F: Tamin'ny ianao tsy mbola mpandika teny na nitantana vondrom-piarahamonina mpandika teny, inona no nandaninao ny fotoanao?
MK: Eny, atleta ihany koa aho, ampahany lehibe amin'ny fiainako sy ny fotoako noho izany izy io. Manao atletisma aho ary mifaninana amin'ny hazakazaka 200 sy 400 metatra. Noho izany, handaniako ny fotoanako betsaka na ny fanazaran-tena na ny fialana sasatra sy mamerin-kery aorian’ny fanazaran-tena. Tiako ihany koa ny mandeha dia an-tongotra lavitra. Monina eto Kolombia Britanika aho ary toerana mahafinaritra hanaovana dia an-tongotra lavitra eto. Ary lehibe tany Kazakhstan koa aho, tany amin'ny faritra be tendrombohitra.
F: Saka sa alika?
MK: Tena saka, na dia tiako aza ny karazana biby rehetra. Raha ny marina, tiako be ny orsa mainty izao, izay avy any Kolombia Britanika misy ahy. Zavaboary mahagaga tokoa izy ireo. Ary tia alika aho. Efa nanana alika aho taloha. Fa ny saka no tena ampahany lehibe amin'ny fiainako. Manana roa aho. Avy any Torkia izy ireo ary nentiko niaraka tamiko nankany Japana ary eto Canada izao. Ka tena saka iraisam-pirenena tokoa izy ireo.